GoSquared: Falanqaynta Waqtiga-dhabta ah iyo Xogta | Martech Zone
GoSquared: Falanqaynta Waqtiga-dhabta ah iyo Xogta
Axad, Nofeembar, 17, 2013 Douglas Karr
Hadaadan maqal GoSquared, waxay horeyba uga socotaa in ka badan 30,000 oo websaydh ah! Suuqyada GoSquared lafteeda sida ugu fudud, uguna fudud in la isticmaalo Analytics abid. Ma aha oo kaliya inay ujeedadoodu tahay inay qaataan muuqaal ahaan Analytics xogta ilaa heerka ku xiga, xogta lafteedu adigaa iska leh adiga oo adeegsanaya API-ga adag. Hadafka 'GoSquared' wuxuu ujeedkiisu yahay inuu ku siiyo wax walba oo aad ugu baahan tahay is-dhexgal dareen leh.
Astaamaha Muhiimka ah ee Falanqaynta GoSquared:
Hadda Dashboard - GoSquared's Analytics madalku wuxuu hubiyaa inaad ogaan kartid qulqulka taraafikada oo aad soo saarto isla markiiba ay dhacaan. GoSquared wuxuu ku tusayaa waxa ka dhacaya bartaada waqtiga dhabta ah.
Isbeddellada - GoSquared wuxuu miisaankaaga muhiimka ah ka dhigayaa macnaha guud. Soo-booqdayaasha, waqtiga firfircoon ee goobta, heerka soo-kabashada iyo inbadan.
Falanqaynta Soo-booqdaha - Falanqaynta booqdaha ee GoSquared waxay ka gudubtaa garaafyada iyo jaantusyada si ay kuu tusaan dadka ku jira bartaada, u akhriya bartaada iyo adeegsiga barnaamijkaaga.
Bulshada - GoSquared wuxuu leeyahay is dhexgal adag oo shabakadaha bulshada ee ugu sareysa sida Twitter, Facebook, Pinterest iyo xitaa Dribbble oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha.
Warbixinno Maalinle ah - GoSquared wuxuu bixiyaa soo koobitaan ku saabsan waxqabadkaaga oo laguugu soo diro sanduuqaaga subax kasta.
kooxaha - Wadaagista kooxda waxaa lagu dhisey laga bilaabo maalinta koowaad. Ku martiqaad qof kasta oo kooxdaada ka mid ah inay adeegsadaan GoSquared - Maamulaha guud, horumariyeyaasha, nashqadeeyayaasha iyo xitaa iibka, mid kastaa wuu waafajin karaa khibradooda.
Engagement - GoSquared wuxuu qiyaasaa kaqeybgal soo-booqde si loo fahmo waqtiga dadku ku qaataan akhriska, xoqitaanka, makiinada, iyo la macaamilka bartaada, si aad u aragto waxyaabaha dhabta ah ee ka shaqeynaya.
API Developer - Dhisida aragga aragtida xogta, isku-darka waxyaabaha-beddelaya, iyo dashboorrada qaaska ah ayaa suuragal ku ah API GoSquared.
GoSquared sidoo kale waxaa ku jira a soosaaray WordPress plugin si aad u hesho.
Seth Godin wuu ku qaldan yahay tirooyinka
Ka soo dejiso In ka badan 100 Tusaalooyin Infographic ah $ 59